Beeraleyda degaanka Shimbiraley oo ka cabanaya Xoolo dhaqatada. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Beeraleyda degaanka Shimbiraley oo ka cabanaya Xoolo dhaqatada.
Beeraleyda degaanka Shimbiraley oo ka cabanaya Xoolo dhaqatada.
Garowe (HM):- Beeralayda deegaan Shimbiraalle oo katirsan Gobolka Nugaal ayaa baahsan ka muujiyey xoolo dhaqato ay shegeen in ay waxyeleyeen qalabka waraabka beeraha degaankaas.
Beeralaydu waxaa ay sheegeen in qalabka waxyeeladu soo gaartay inuu isugu jiro matooro, Soollaro , Baabuur iyo ceelal la bur buriyey,iyadoo dhibtaa ay gaysteen dad xoolo dhaqato ah oo ka hor yimi wax beerashada dhulka shinbiraalay.
Khasaaraha soo gaaray dadka beeralayda ah ee degaanka Shinbiraalay ayaa lagu qiyaasay inay dhantahay aduun lacageed oo dhan hal-milyan oo doolar,waxaana xarunta gobolka lagu qabtay kulan looga hadlayo sidii xal looga gaari lahaa dhibatadan.
Gudoomiyaha gobolka nugaal Cumar Cabdullahi Faraweyne ayaa sheegay in maamulka gobolka nugaal uu wax ka qabandoona cabashada ay soo gudbiyeen dadka beeralayda ah ee dhibaatada xoogan kazoo gaartay dadka xoolalayda ah.